I-China 63MM / 2,5 Inch Herb Grinder 4 Izicucu ze-Zinc Alloy Grinder nge-Drawer Production and Factory | I-Hemgrinder
I-Aluminium Alloy Grinder
I-Zinc Alloy Grinder
I-Veg / Flower formula
I-Linear Bar Light
I-63MM / 2,5 Inch Herb Grinder 4 Izicucu ze-Zinc Alloy Grinder ezine-Drawer
I-herb grinder izingcezu ezi-4 namagumbi ama-3 avumela ukugaya, ukugcinwa, nokuhlungwa kwempova. Lokhu kugaya amakhambi ama-4 piece design disassembles kalula, kuhlinzekelwa ukusetshenziswa okulula nokuhlanza i-grinder herb.
Into No: GSRP2603
Okugciniwe: 4 Ama-Piece
Indwangu: UZinc Alloy
Usayizi (ubukhulu x ukuphakama): 2,5 x 2.6 inch (63 x 66mm)
Khula Isisindo: 252g
Cela isilinganiso namuhla!
* I-grb yemifino izingcezu ezi-4 namagumbi ama-3 avumela ukugaya, ukugcinwa, nokuhlungwa kwempova. Lokhu kugaya amakhambi ama-4 piece design disassembles kalula, kuhlinzekelwa ukusetshenziswa okulula nokuhlanza i-grinder herb.
* Ukusula okuphezulu kukuvumela ukuthi ubone inqubo yonke yokugaya, amakhabethe asusiwe akuvumela ukuthi ukhiphe izinto zokugaya nganoma yisiphi isikhathi. Isikrini se-Mesh sesihlungi se-grinder kahle impova, isikhuhla esincane esifakiwe sisiza ekuqoqweni kwe-powder.
* Ilungele ukugaya amakhambi, izinongo, itiye njll. I-grb ye-herb ene-lid enamandla enozibuthe isiza kakhulu ekunciphiseni ukuchitheka futhi igcine namakhambi asele asha futhi enephunga mahhala.
* Lesi siga sezinongo senziwe ngensimbi eqinile futhi eqinile ye-zinc. Amazinyo abukhali akunika isipiliyoni sokugaya okusheshayo.Ihin Poly O-Ring yokugaya okushelelayo nokushayisana okuncane, ukuqina okuthe xaxa.
* I-rainbow grinder engu-2,5inch ububanzi, ukuphakama okungu-2.6inch, ubungako obwanele nosayizi ophelele, obumnandi nobungcweti. Imibala yomnyama egqamile enhle futhi imfashini.
* Izingcezu ezi-4 namagumbi ama-3 avumela ukugaya, ukugcinwa, nokuhlungwa kwempova.
* I-4 piece design disassembles kalula, ihlinzekela ukusetshenziswa okulula nokuhlanza i-grinder herb.
* Ukusula okuphezulu kukuvumela ukuthi ubone inqubo yonke yokugaya, amakhabethe asusiwe akuvumela ukuthi ukhiphe izinto zokugaya nganoma yisiphi isikhathi.
* Isikrini se-Mesh sesihlungi se-grinder emihle kakhulu, isikhafu esincane esifakiwe sisiza ekuqoqweni kwe-powder.
* Isembozo esinamandla sikazibuthe sisiza kakhulu ekunciphiseni ukuchitheka futhi sigcine amakhambi asele asha futhi enephunga mahhala.
* Amazinyo abukhali akunika isipiliyoni sokugaya okusheshayo.Thin Poly O-Ring yokugaya okushelelayo nokushayisana okuncane, ukuqina okuthe xaxa.
Sibhalele inothi futhi sizobuyela kuwe ngokushesha okukhulu.
I-63MM / 2,5 ″ Emnyama 4 ye-Piece Spice Grice Zin ...
I-63MM / 2.5inch i-rainbow Zinc Alloy Spice Herb Grin ...
I-60MM / 2.4 Inch Magnetic Grinder Hexagon 4 Piece ...
I-63MM / 2,5 ″ I-Zinc Alloy Sula i-Herb Grind ephezulu ...
I-63MM / 2,5inch Herb Grinder rainbow Colour 4 Piece ...
Ikheli: 1816 Bldg G, panorama yedolobha laseHualian, iDis 27, iDalang Bao'an dist, iShenzhen, China
I-1816 Bldg G, i-panorama yedolobha lase Hu Huia, iDis 27, iDalang Bao'an dist, iShenzhen, China
© HEMGRINDER 2020BONKE AMALUNGELO AXELWE.
Amathiphu - Imikhiqizo Eshisayo - I-Sitemap